Madaxweynaha dalka oo saxiixay hindisaha lagula tacaalayo falal dambiyeedyada intarneetka
Hoggaamiyaha ugu sareeya ee dalka Uhuru Kenyatta ayaa maanta qalinka ku duugay hindisa sharciyeedka loo yaqaano the Computer Misuse and Cybercrimes Bill 2018 oo mamnuucaya in si aanan habbooneyn loo adeegsado baraha bulshada iyo qalabka intarneetka laga isticmaalo.
Sharcigan ayaa fududeynaya in xili hore la ogaado falal dambiyeedyada dhanka intarneetka ah , laga hor tago , laga ficil celiyo , baritaano lagu sameeyo dacwad la xiriirtana maxkamada la geeyo.
Waxaa uu sarakiisha qaabilsan dambi barista u ogolaanaya in la baaro kadibna lala wareego daatada lagu keydiyay kombiyuutarada.
Sido kale waxaa uu soo dhisaya guddiga qaran ee isku duwidda isticmaalka kombiyuutarada iyo la tacaalidda falalka aanan wanaagsanayn ee lagu geysto aaladda intarneetka.
Dembiyada loo adeegsan karo in sharcigan lagu fuliyo waxaa ka mid ah in la soo bandhigo nambarada sirta ah, in la daabaco waxyaabo been abuur ah , muuqaalada anshax darrada ah ee carruurta lala wadaago , argagixisada intarneetka lagu faafiyo iyo faafinta sawiradda aanan habbooneyn.
Hindisa sharciyeedkan waxaa madaxweynaha ku wareejiyay guddoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi.
Mr. Kenyatta ayaa qalinka ku duugay isagoo ku sugan madaxtooyada dalka looga arrimiyo ee State House, waxaana goob joog ka ahaa madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto, wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Dr. Fred Matiang’i, hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka Aden Barre Ducale iyo xeer ilaaliyaha guud Paul Kihara Kariuki
Sharcigan waxaa ku qeexan in qofkii daabaco ama baraha bulshada ku qoro warar been abuur ah la dul dhigaya ganaax lacageed oo gaaraya 5 milyan oo shilin ama laba sano oo xabsi ah.
Hadii uu qofku sii faafiyo muuqaalo anshax darro ah waxaa laga qaadaya 300,000 oo shilin ama 30 sano oo xabsi ah ama labaduba.
Cidii lagu cadeeyo inay caruurta la wadaagtay ama ay faafisay sawiradda aanan habbooneyn ee carruurta ay qeyb ka yihiin waxaa lagu ganaaxaya 20 milyan oo ganaax ah , 25 sano oo xabsi aha ama labaduba.
Hadii la ogaado in macluumaadka argagixisada tageeraya uu qofku baraha bulshada u adeegsaday waxaa la dul dhigay 5 milyan oo shilin , 10 sano oo xabsi ah ama labaduba.
Wadamada sharcigan oo kale meel mariyay ee adeegsanaya waxaa ka mid ah Malaysia halka ilaa iyo hadda hal qof lagu xukumay.
Tallabada uu madaxweynaha maanta ku ansaxiyay sharcigan , ayaa imaaneysa iyadoo horay loogu soo jeediyay baaqyo kala duwan oo ah inuusan qalinka ku duugin.
← DHAGEYSO Barnaamijka Madasha, Qisooyinka 16-05-2018
Booliska oo sheegay in bisha ramadaan amniga la xoojinayo →